समाचार « Channel Np
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको उपचार खर्च ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका ओलीको अनुमानित उपचार खर्च ५ देखि ६ लाख
काठमाडौं, फागुन ३० । सरकारले मोबाइल एपमार्फत भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्दै आएका राइड सेयरिङ टुटल र पठाओलाई यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री,
काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले ठूला जमघट हुने सामाजिक कार्य भोज, उत्सव एवं पर्वमा सहभागी नहुन आह्वान गरेको छ। संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत यस्तो
सय दिनमै दे,खियो मन्त्री नेम्वाङको काम !
काठमाडौं । मन्त्रीहरुको कामप्रति जनस्तरबाट निकै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर चार गते मन्त्रीमण्डलमा फे,रबदल गरे । उनले ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई ह,टाएर नयाँ मन्त्री नि,युक्त
कोटेश्वर-कलंकी सडक खण्डमा पनि लेन प्रयोगमा नयाँ नियम लागू हुने
काठमाडौं । कोटेश्वर–कलंकीको ८ लेन सडक खण्डमा सवारी लेन प्रयोगसम्बन्धी नयाँ नियम लागू हुने भएको छ । चैत २ गतेदेखि यात्रुवाहक तथा मालवाहक र कम गतिमा गुड्ने सवारी साधनहरू बायाँ
कोरोनाको शं,का लागे आफै क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छः सरकारले उपचार गर्न सक्दैन – स्वास्थमन्त्री (भिडियो सहित)
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस सं,क्रमणको आ,शंकामा क,सैलाई क्वा,रेन्टाइनमा राख्न न,सक्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्या,नाकर्षण पत्र बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त
सेयर डिलरको इजाजत छिट्टै
काठमाडौं : सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले स्टक डिलरको इजाजत दिने नीतिगत निर्णयको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनभित्रै नीतिगत निर्णय हुने बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए।
नेपाली राजदूताबासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ किन?
नयाँ दिल्ली । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाका मानबहादुर शाही वर्षमा दुई पटक भारत जान्छन् । उनी भारत गएर आफ्नो व्यापार–व्यवसाय गरेर फर्किन्छन् । कहिलेकाही त शाहीको भारत आवतजावत वर्षमा ६
जनताको असली नेता गोकर्ण बिष्ट, सलुट छ गोकर्ण सर !
गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाबाट कुलपुजाको लागि बाग्लुङ्गको निसिखोला जाँदै गरेको जीप दुर्घटना भएको छ। खबर लगत्तै घाइतेहरुको उद्धार तथा उपचारको व्यवस्थाका लागि माननीय गोकर्ण विष्ट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर
धनकुटा । अहिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सूरक्षा भत्ता वाँड्ने कार्य भईरहेको छ । जसअनुसार धनकुटाको पाख्रीवास नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा भत्ता वितरणको काम जारी छ । पाख्रीवास
न्यायकोपक्षमा विगुल बजाउँदै चर्चित कलाकारहरु पुगे चितवन, भन्छन्– ‘रवि निर्दोष छन्’
कृष्ण पाण्डे, काठमाडौं, ७ भदौ । मुलुक र मुलुकवासीको ध्यान यतिखेर चितवन तिर तानिएको छ । सञ्चारकर्मीद्धय रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको भन्दै उनीहरुलाई साथ दिन देशका कुना